काबुलमा फसेका ४२ नेपालीको भारतीय विमानबाट उद्धार गर्न सम्भव छ ? - EKalopati
काबुलमा फसेका ४२ नेपालीको भारतीय विमानबाट उद्धार गर्न सम्भव छ ?
काबुल । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार अहिले काबुलमा ४२ जना नेपालीहरु एयरपोर्ट नजिक उद्दारको पर्खाइमा छन् । बिहीबार भएको विस्फोटको घटनामा उनीहरु एयरपोर्टबाट १३ किमी टाढा पर्ने एक गुरुद्धारमा भेला भएर पर्खाइमा बसेको जनाइएको छ ।
परराष्ट्रको उद्दार कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार विस्फोट अघि नै उनीहरु गुरुद्धार पुगिसकेकाले उनीहरु सुरक्षित छन् । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले ती नेपालीलाई उद्दार गर्न भारत र अमेरिका सरकारसँग समन्वय गरिरहेको छ ।
Previous articleट्राफिक प्रहरीले पार्किङबाटै गायब भएका मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीलाई बुझायो
Next articleपरासीमा डुबानले विद्युत् आपूर्ति बन्द